ch 17 လုကာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 17 လုကာ
17:1 သူသည်မိမိတပည့်ကပြောပါတယ်: အရှုပ်တော်ပုံပေါ်ပေါက်ဖို့မများအတွက် "ဒါဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး. ဒါပေမဲ့သူတို့လာသူ့ကိုမှမင်္ဂလာတော်မူသောအားဖြင့်!
17:2 ကြိတ်ဆုံကျောက်သည်မိမိလည်ပင်းတစ်ဝိုက်ထားကြ၏နှင့်သူပင်လယ်ထဲသို့ချပစ်ကြ၏မယ်ဆိုရင်ဒါဟာသူ့အတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်, လမ်းလွဲတယောက်ဤသူငယ်၏ဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ထက်.
17:3 ကိုယ်အဘို့ကိုယ်စေ့စေ့နားထောင်ဖြစ်. သင်၏အစ်ကိုသင်တို့တဘက်၌ပြစ်မှားမိခဲ့လျှင်, သူ့ကိုတညျ့. ထိုမင်းသည်နောင်တရမူလျှင်, သူ့ကိုခွင့်လွှတ်.
17:4 ထိုမင်းသည်သင်တို့တဘက်၌ခုနစ်ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ပြစ်မှားမိလျှင်, ခုနစ်ကြိမ်နေ့၌သင်တို့အားပြန်လှည့်ခဲ့သည်, ဟုဆို, 'ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး,'' ထို့နောက်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်။ "
17:5 ထိုအခါတမန်တော်သခင်ဘုရားကလည်း,, "ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပှား။ "
17:6 သို့သော်လည်းသခင်ဘုရားကဆိုသည်: "သင်မုန်ညင်းစေ့နှင့်တူယုံကြည်ခြင်းအားရှိပါက, သင်ဤပိုးစာပင်ဆိုရစေခြင်းငှါ, '' နှုတ်ခံရမှာ, နှင့်။ ပင်လယ်ထဲသို့အစားထိုးရမည် '' ထိုအသငျသညျကိုနာခံရမယ်လို့.
17:7 သင်၏သို့သော်အရာ, ကျွဲနွားထွန်သို့မဟုတ်နို့တိုက်ကျွေးမှု, ကျွန်ရှိခြင်း, သူ့ကိုပြောလိမ့်မယ်, သူသည်တောမှပြန်လာသောခဲ့သည်အဖြစ်, '' ကိုချက်ချင်းလာ; စားရန်ထိုင်ပြီး,''
17:8 သူ့ကိုမှမပြောမယ်လို့: 'ငါ့ညစာစားပြင်ဆင်ပါ; ကိုယ့်ကိုကိုယ်စည်းနှင့်ငါ့ထံသို့ဝန်ကြီး, ငါမစား, သောက်နေစဉ်; ဤအမှုအရာပြီးနောက်, သငျသညျအစာကိုစားသောက်ရကြလိမ့်မည်?''
17:9 သူသည်ထိုကျွန်အားကကျေးဇူးတင်ကြပါလိမ့်မည်, သူ့ကိုလုပ်ဖို့မှာထားတော်မူသောအရာကိုပြု?
17:10 ငါမစဉ်းစား. ဒါကြောင့်လည်း, သငျသညျဖို့သင်ပေးခဲ့ကြကြောင်းဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုသောအမှုသောအခါ, သငျသညျပွောသငျ့: '' ကျနော်တို့အချည်းနှီးအမှုထမ်းဖြစ်ကြ၏. ကျွန်ုပ်တို့သည်ပွုပါပွီသင့်တယ်ဘယ်အရာကိုပြုကြပြီ။ ''
17:11 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, သူသည်ယေရုရှလင်ဖို့ခရီးသွားလာနေစဉ်, သူရှမာရိနှင့်ဂါလိလဲပြည်အလယ်၌ရှောက်သွားသဖြင့်.
17:12 သူသညျအခြို့သောမြို့အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်အဖြစ်, တကျိပ်နူတို့သညျသူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့, သူတို့ကတစ်ဦးအကွာအဝေးမှာရပ်လျက်,.
17:13 ထိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့အသံကို, ဟုဆို, "ယေရှု, အရှင်ဘုရား, ကျွန်တော်တို့ကိုသနားယူ။ "
17:14 ထိုသူတို့မြင်သောအခါ, ဟုသူကပြောသည်, "Go ကို, သော။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အားကိုယ်ကိုပြသ "ထိုသို့ဖြစ်ပျက်, သူတို့မသွားခဲ့ကြသည်အဖြစ်, သူတို့ဆေးကြောသန့်စင်ခဲ့ကြ.
17:15 ထိုအခါသူတို့ကိုတ်, ထိုသူသည်စင်ကြယ်စေခဲ့ကွောငျးကိုသိမြင်လျှင်, ပြန်လာသော, ကျယ်သောအသံနှင့်ဘုရားသခင်ခြီးမှမျးသ.
17:16 ထိုမင်းသည်သူ၏ခြေရင်း၌ဆင်းရင်ဆိုင်ရကျဆင်း, ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း. နှင့်ဤတစ်ဦးရှမာရိလူဖြစ်ခဲ့သည်.
17:17 နှင့်တုန့်ပြန်, ယရှေုသညျဟုပြောသည်: "တဆယ်, စင်ကြယ်မဖန်ဆင်းခဲ့? ဒီတော့ဘယ်မှာကိုးနေကြသည်?
17:18 တစုံတယောက်မျှဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေ ပြန်. ပေးမညျသောသူရှာတွေ့ခဲ့သည်, ဒီအနိုင်ငံခြားသား မှလွဲ.?"
17:19 သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်: "ထလော့, ထွက် သွား.. သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအဘို့အသင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းသိရသည်။ "
17:20 ထိုအခါသူသည်ဖာရိရှဲတို့ဖွငျ့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်: "ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ရောက်လာပေရတဲ့အခါ?"ထိုအခါတုန့်ပြန်, သူတို့ပြောဆို: "ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် unobserved ရောက်ရှိ.
17:21 ဆိုတော့, သူတို့မပြောလိမ့်မယ်, '' ကြှနျုပျသညျ, ဒါကြောင့်ဒီမှာ,'သို့မဟုတ်' 'ကြှနျုပျသညျ, ဒါကြောင့်လည်းရှိ၏။ '' ကြည့်ရှုလော့, ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့အထဲ၌ရှိ၏။ "
17:22 သူသည်မိမိတပည့်ကပြောပါတယ်: သင်လူသားသည်၏တစျနေ့ကိုတွေ့မြင်ခြင်းငှါအလိုရှိကြလိမ့်မည်သည့်အခါ "ဒီအချိန်ရောက်လိမ့်မည်, နှင့်သင်မြင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
17:23 ထိုသူတို့သညျသငျတို့ပွောလိမျ့မညျ, '' ကြှနျုပျသညျ, သူကဒီမှာ,'နဲ့' ကြည့်ရှု, သူလည်းရှိ၏။ '' ထွက်သွားကြဖို့ရှေးခယျြမနေပါနဲ့, သူတို့နှင့်နောက်သို့မလိုက်ကြဘူး.
17:24 မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌ထံမှနည်းတူလျှပ်စစ်ပြက်ပြက်ဘို့နှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌သမျှကိုမှထွန်းလင်း, ထိုနည်းတူလူသားသည်မိမိနေ့၌ဖြစ်လိမ့်မည်.
17:26 ထိုသို့နောဧလက်ထက်၌ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့, ထိုနည်းတူယောက်ျား၏သားတျော၏လက်ထက်ကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်.
17:27 သူတို့ကစားသောက်ခဲ့ကြ; သူတို့မိန်းမများတယူပြီးခဲ့ကြနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးစားခံရ, ပင်နောဧသည်သင်္ဘောထဲသို့ ဝင်. သောနေ့မရောက်မှီ. ထိုအခါရေလွှမ်းမိုးသောသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည် လာ. , ပျက်စီး.
17:28 ဒါဟာလောတ၏လက်ထက်ကာလ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုဆင်တူဖြစ်ရလိမ့်မည်. သူတို့ကစားသောက်ခဲ့ကြ; သူတို့ကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်းခံခဲ့ရသည်; သူတို့စိုက်ပျိုးနှင့်အဆောက်အအုံခဲ့ကြသည်.
17:29 ထိုအခါ, လောတသောသောဒုံမြို့မှထွက်သွားကြသောနေ့၌, ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ကနေမီးနှင့်ကနျ့ရွာစေ, ထိုသို့ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီး.
17:30 ဤအရာတို့ကိုအလိုအရ, လူသားသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်သည့်အခါဒါကြောင့်နေ့ရက်ကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်.
17:31 ထိုခဏခြင်း, အကြင်သူသည်ထိုခေါင်မိုးပေါ်ရှိအပေါ်ဖွစျလိမျ့မညျ, ဗိမာန်တော်၌သူ၏ဥစ်စာနှင့်အတူ, သူ့ကိုသူတို့ကိုယူမှမဆင်းသက်ကြကုန်အံ့. ထိုအခါလယ်ပြင်၌အကြင်သူသည်ဖြစ်လိမ့်မည်, အလားတူ, သူ့ကိုနောက်ကျောလှည့်မမှတ်စေနှင့်.
17:33 သူမည်သည်ကားမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းငှါရှာကြံသိရသည်, ရှုံးလိမ့်မည်; အကြင်သူသည်ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့, အသက်ပြန်ရှင်ဖို့ကငါဆောင်ခဲ့မည်.
17:34 ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, ထိုညဉ့်အတွက်, နှစ်ဦးတဦးတည်းအတွက်အိပ်ရာရှိလိမ့်မည်. တဦးတည်းကိုတက်သိမ်းယူလိမ့်မည်, နှင့်အခြားကျန်ရစ်လိမ့်မည်.
17:35 နှစ်ဦးကိုအတူတကွ grindstone မှာဖြစ်လိမ့်မည်. တဦးတည်းကိုတက်သိမ်းယူလိမ့်မည်, နှင့်အခြားကျန်ရစ်လိမ့်မည်. လယ်၌ရှိသောသူနှစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မည်. တဦးတည်းကိုတက်သိမ်းယူလိမ့်မည်, နှင့်အခြားကျန်ရစ်လိမ့်မည်။ "
17:36 ကိုတုံ့ပြန်, သူတို့ကသူ့ကိုအားဆို၏, "အဘယ်မှာရှိ, သခင်ဘုရားသည်?"
17:37 ထိုသူတို့အားဆို၏, "ကိုယျခန်ဓာဖွစျလိမျ့မညျနေရာတိုင်းမှာ, ထိုအရပျတှငျလညျး, ရွှေလင်းတစုဝေးကြလိမ့်မည်။ "